Iibso A -Line Lantern Sleeve Sashes Solid Satin Mini Dharka Yaryar - Dhoofinta Bilaashka ah & Canshuur La'aan | WoopShop®
A-Line Farshaxan darafta Sashes adag Satin Mini Dharka
dib u eegista 120
Color Purple cagaaran kaakiga
Dhalaal / Midab cagaaran / XL cagaaran / XXL cagaaran / M cagaaran / L Iyo guduud / L Iyo guduud / XL Iyo guduud / S Iyo guduud / M Kaakiga / S Kaakiga / M Khaki / XXL cagaaran / S Kaakiga / L Kaakiga / XL
A -Line Lantern Sleeve Sashes Solid Satin Mini Dress Mini - Purple / XXL gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Fadhiga Fanka: Qoryaha Laydhka
Lambarka Moodalka: J27190
Midabka: Khaki, Purple, Green
Xusuusin: Fadlan si adag u raac jaantuska cabbirka si aad u doorato cabbirka. Ha ku xulin si toos ah hab dhaqankaaga. Cabirku wuxuu yeelan karaa kala duwanaansho 2-3cm sababtoo ah cabirka gacanta. Fadlan la soco markaad cabireyso. Soo jeedin ah in gacmaha lagu dhaqo biyo qabow. Waxay ka caawin kartaa walxaha inay ilaashadaan qaabkooda.
Iyadoo ku saleysan qiimeynta 120
Ilaahayow. Midabku waa dhalaal. Dhererka ayaa soo dhawaaday. Waan xiran doonaa
Dharka waxaan jeclahay sawirka. Waxaan ku talinayaa
Dharka cajiibka ah, waan ku faraxsanahay. Waxay ku fadhiyaan shax, xooga saara. Maaddadu waa mid khafiif ah, jilicsan, oo la mid ah xariirta, laakiin synthetics. Xagaaga iyo shaqada waa ikhtiyaar aad u fiican, oo aan hufnayn. Wuxuu yimid hal baakad oo leh amarro kale. Ku talin.
Dharka ayaa si degdeg ah loo raray. Waxaan ku tiirsanaa ra'yiga, weli iskuma dayin. Waxaan ka tagi doonaa fikrad kale.